Maitiro Ekufananidza 2 Google Calendars | Martech Zone
Nekutorwa kwesangano rangu uye ikozvino kushanda semubatsiri pane yangu nyowani Salesforce shamwari, Ndine nyaya pandiri kumhanya maviri G Suite account uye ikozvino uine ma2 makarenda ekugadzirisa. Yangu yekare agency account ichiri kushanda kuti ishandise kune angu zvinyorwa uye kutaura - uye iyo nyowani account ndeye Highbridge.
Kunyange ini ndichigona kugovana nekuona khalendari imwe pane imwe, ini ndinodawo kunyatsoratidza nguva kubva kune imwe khalendari pane imwe neimwe sekubatikana. Ini ndakatsvaga chero mhinduro * uye nzira chete yandaigona kuzviita yaive yekukoka imwe account kuechiitiko chimwe nechimwe, icho chakashata uye chingakonzera nyonganiso nevatengi.
Zvinotonyanya kukosha ndezvekuti ini-yekuzvigadzirira-yega kunyorera kune yega yeakarenda. Izvi zvakakonzera kuti misangano yakawanda irongedzwe mukukonana kwandaifanirwa kugadzirisa. Zviri kumboshungurudza. Ndinoshuva izvozvo G Suite yakapa kugona kunyorera kune imwe khalendari uye iite kuti ive default se takabatikana pakarenda yekutanga.
Kutsvaga kwangu kwakaguma nemhinduro inoshamisa, SyncThemCalendars. Nepuratifomu, ndakakwanisa kuwedzera mawiriridzo maviri… kubva kuakaunzi yega yega kuenda kune imwe.
Nei uchifananidza maKendendende Ako?
Panogona kunge paine akawanda mashandisiro emakesi eiyi mashandiro. Iwe ungangoda kuvharira nguva pakarenda yako yebasa zvichienderana neyako yakavanzika / pachedu pakarenda. Ungangoda kuteedzera zviitiko zvese kubva kukarenda yetimu kuenda kune yako wega. Kana kuti pamwe uri freelancer unoshanda nevatengi vakati wandei uye unoda neimwe nzira kuronga basa rako.
Iyo account inobvumidza iwe kusaina neinokosha khalendari uye wozofananidza kusvika kumashanu makarenda. Kunyangwe zvirinani, iwe unogona kugadzirisa iyo karenda ruzivo, kusanganisira:
Chiyeuchidzo - default iri kucheneswa sezvo izvo zvaizoguma kune ese makarenda kukutumira iwe chiyeuchidzo.
ruvara - kunyanya kubatsira, ini ndinogona kuve neako yega yekupinda khalendari ichizivikanwa nerimwe ruvara.
Iyo diki diki diki yekushandisa uye isingadhuri pachibvumirano chegore. Ndine chokwadi chekuti ichandiponesa kupfuura zvazvinoita mukufamba kwenguva.
Tanga Yako Yemazuva gumi nemana Muedzo
Disiki: Ndiri mubatanidzwa we SyncThemCalendars
Tags: G Suitegoogle kalendarigsuitesei kutikwezvinhukurongasyncsynchronizesyncthemcalendars